Izindaba - Amaphrofayli e-aluminium enziwe ngokwezifiso adinga ukubhekelwa engcupheni
1. Ngabe kufanele yenziwe ngezifiso ngempela?
Uma ufuna ukwenza ngokwezifiso iphrofayli ye-aluminium yohlaka lwangaphandle lwemishini, kunconywa ukuthi ungenzi ngokwezifiso, ngoba iphrofayli ejwayelekile yezimboni ze-aluminium iphrofayli yekhwalithi ephezulu ye-aluminium, futhi kunezincazelo eziningi, ezingafinyelela cishe zonke izidingo wohlaka. Futhi uhla oluphelele lwezesekeli, izinketho ezahlukahlukene zokuxhumeka ongakhetha kuzo. Abanye abantu bangathi uhlaka lwami olungaphandle alunanxande kepha luyindilinga, kuyilapho ingxenye ejwayelekile ye-aluminium yezimboni ingunxande noma isikwele. Ngingasho ngokuzibophezela ukuthi lokho futhi akunankinga, inqobo nje uma umugqa wokufaka izinto, kungekho nhlangano yengcindezi, ihholo lethu lombukiso le-aluminium octagonal display cabinets akhiwe ngamaphrofayili we-aluminium yezimboni.
2. Ukujiya kwe-aluminium, kungcono?
Uma kufanele wenze ngokwezifiso iphrofayili, akubizi ukuyenza ngendlela oyifisayo. Izindleko zokuvula zokufa kwamaphrofayli e-aluminium zishibhile impela uma ziqhathaniswa nezinye izikhunta. Amanye amaphrofayili we-aluminium wangokwezifiso adinga ukudlala indima ethile, ngakho-ke lapho ukwakheka komklamo wokudweba kukhulu kakhulu, ukuze kuzuzwe umthamo omkhulu wokuthwala umthwalo. Kepha ngifuna ukusho ukuthi ukushuba kodonga akukubi kakhulu, ngakolunye uhlangothi, intengo yodonga iyashuba, intengo ye-aluminium alloy yona uqobo iphezulu, okwandisa kakhulu izindleko; Ngakolunye uhlangothi, udonga lujiyile, ubunzima buphansi. Njengephrofayili ye-aluminium engu-6063 esivame ukuyenza, indinganiso yobulukhuni ingu-8-12HW. Uma ukushuba kodonga kukhulu kakhulu, ubulukhuni bungafika ku-8HW kuphela. Isibonelo, ubukhulu bodonga lwephrofayili yethu ejwayelekile yezimboni ze-aluminium yi-2mm kuphela, kepha ukwakheka kwayo kunengqondo kakhulu, okungahlangabezana nezidingo eziphezulu zokuthwala umthwalo.
3. Ungahlanganisa amaphrofayli amabili abe munye?
Amanye amakhasimende afuna ukonga ezinye izindleko zesikhunta noma abe neminye imibono, kunezinhlobo eziningi zamaphrofayli e-aluminium egcizelele, adinga ukusebenzisa inhlanganisela yamaphrofayili amaningi e-aluminium, abaklami benkampani yekhasimende bazohlanganisa lezi zikhuni ezimbili zibe yisikhunta, bacabange ukuthi lokhu kungonga izinto eziningi. Empeleni, bengizothi kuzobambezela izinto. Sake saba nekhasimende elisebenza ngale ndlela. Bekufanele ngabe sivule amasethi amabili okubumba, eyodwa inodonga oluncane kakhulu kanti enye inodonga olujiyile kakhulu. Kamuva, ngashintsha umdwebo wokuklama futhi ngahlanganisa lezi zingqimba ezimbili, okwaholela ekubunjweni okucishe kwasulwa. Ngazama ukushintsha isikhunta futhi ngashintsha isikhunta. Ngemuva kwezikhathi ze-N zokulingwa, isikhunta besifanelekile. Ngoba ukushuba kodonga kubanzi kakhulu, kunzima kakhulu ukukhiqiza.
4. Ngubani ophethe isikhunta sephrofayili ye-aluminium?
Amaphrofayili e-aluminium enziwe ngokwezifiso adinga ukubunjwa, futhi imali yokuvula isikhunta imvamisa ikhokhwa yikhasimende (ingabuyiselwa imali uma ivolumu yokuthenga yonyaka ifinyelela ku-tonnage ethile). Lapho-ke ubunikazi besikhunta kumele kube yikhasimende, lokhu akunakungatshazwa. Kepha isikhunta ngokuvamile asithathwa ngamakhasimende, kepha sigcinwa kumenzi. Njengoba amaphrofayili e-aluminium enziwe ngendlela oyifisayo angavamile uku-odwa kanye, akusebenzi kangako kumakhasimende ukuwayisa ekhaya. Umenzi unendawo yokugcina ekhethekile yokugcina isikhunta, futhi isikhunta siyikhwalithi yensimbi engu-H13, akulula ukulimaza. Ngezizathu ezithile ezikhethekile, amanye amakhasimende angathanda ukuthatha isikhunta asishintshe aye kwesinye ifektri ukuze sikhiqize. Ngingakweluleka ukuthi uzame ukungakwenzi lokhu bese unquma ukuthi ufuna ukukwenza kuphi ngaphambi kokuvula isikhunta. Ngoba bonke abakhiqizi be-aluminium extruder abafani, iphedi yokufa, imininingwane yekhava ye-die nayo yehlukile. Sihlangane namakhasimende amaningi afuna ukuthatha isikhunta sawo asiyise embonini yethu ukuze sikhiqizwe, kepha sawenqaba ngesizotha.
Lokhu okungenhla yilokho engifuna ukwethula, ngiyethemba ukuthi kungakusiza.